တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: တကိုယ်ထဲနွှဲတဲ့ တပို့တွဲ ထမနဲ
Posted by မေဓာဝီ at 4:22 PM
2/17/2011 5:26 PM
I feel like trying to make it. I have never make it before though.Thank you for sharing!!
2/17/2011 5:45 PM
ခြေမလှလို့ စေက* မလာသည်
2/17/2011 5:46 PM
အစ်မ မေဓာဝီက အဲ့ဒီလိုလေး ထမနဲ ထိုးနည်းကို သေချာ ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြထားတော့ ကောင်းလိုက်တာ။ ကျေးဇူးလည်း သိပ်တင်တာပဲ။ ရို့စ် တစ်ခါမှ ထမနဲ မထိုးဖူးဘူး။ အစ်မ နည်းလေးနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်။
2/17/2011 6:04 PM
တခါက အဖွားလေ မြေးတွေကို ကောက်ညှင်းပေါင်းကျွေးတာ ပျော့ပြဲသွားလို့ ထမနဲဆက်ထိုးလိုက်တာ သတိရမိတယ်။
ကျုပ်တို့ရွာမှာက အမဲရောင်ပဲ မြင်ဖူးတာ အရီးလေးရဲ့ ဒါနဲ့ ဆွမ်းတော်တင်ပြီးရင် အနော်တို့အိမ်ကိုလဲ တစ်ပန်းကန်လောက်တော့ ၀ဲလိုက်ဦးနော့
ထမဲနဲပွဲတွေ မြိုင်ခဲ့တဲ့ ခေတ်တွေကို
သတိရတယ်၊ အခုတော့ မြိုင်နေပါသေးတယ်
ပိုက်ဆံပေါတဲ့ လူတွေပေါ့ ... :P
အမေတို့အိမ်မှာ နှစ်တိုင်းစတိအနေနဲ့ ထမနဲနည်းနည်း လုပ်ဖြစ်တယ် .. ကျမတော့ မကြိုက်ဘူး .. အမေတို့လုပ်တာတေ့နေကျဆိုတော့
မမေလုပ်ထားတဲ့ပုံတွေကြည့်ရတာ စနစ်ကျပြီး တော်တော်စားကောင်းမှာ ပုံကြည့်တာနဲ့သိနေတယ်
မမေဓာဝီက သေသေချာချာ ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြထားလို့ ဘေးနားကနေ အစအဆုံး ကိုယ်တိုင် လိုက်ထိုးနေရ သလိုပဲ..၊ ဒယ်အိုးပုံလေး သုံးပုံ ဘေးချင်းယှက်လျက် အရောင်ပြောင်းလာတာ သဘောကျတယ်၊ နှာခေါင်းထဲ မှာ ထမနဲ နံ့တွေတောင် ရလာသလိုပဲ...၊
မနေ့ကပဲ ဟိုဘက်ကမ်းက ပို့လိုက်တဲ့ ထမနဲ တစ်အိုးင်္ကြီးရလိုက်တယ် စားကောင်းမှကောင်း အစ်မတော့ ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားမှာပဲ ထမနဲက မထိုးတက်ရင် တော်တော်ကိုရုပ်ဆိုးတဲ့အမျိုးပဲလို့ကျနော်တော့ထင်တယ် ။
2/18/2011 1:38 AM
ဘကျောက်နည်းနဲ့တော့နဲနဲကွာတယ်..အညာကနှမ်းမနဲခေါ်ပြီး..အုန်းတို့ သုံလေ့သတ်ိမရှိဘူး..ကောက်ညှင်းကို ပေါင်းအိုးနဲ့မချက်ပဲ ဒယ်ထဲမှာပဲ ကောက်ညှင်းကိုဆီသတ်..ဂျင်းရည်လေးတောက်တောက်ပြီး နှပ်သွားတာ..နှမ်းထောင်းများများနဲ့ ဒယ်အိုးကြီးဆိုရင်တော့ လှော်တက်..အိမ်စားဖို့ဆိုရင် ယောက်မ ၂ ချောင်းနဲ့ ကြိတ်ချေပေးရတာ..ဆန်စေ့မပေါ်အောင်ချေန်ုင်လေ စားကောင်းလေပဲ..ကောက်ညှင်းချေပြီးမှ မြေပဲဆန်.အုန်းဆံကျော်..ထည့်၊ ချိုးလေးကပ်ထား..ဆီတွေ အပေါ်ဝေ့တက်လာတော့ အုန်းသီးဆံလေးဖြူးလိုက်တာပဲ ..ဘကျောက်ကတော့ အုန်းသီးမကြိုက်တော့မထည့်ဘူး..သီဟိုဠ်စေ့တို့ဘာတို့တော့ ထည်းတတ်တယ်.. ထိုးတော့စားပြီးပြီ..ဆီများများမထည့်ရဲတော့..သိတ်တော့မကောင်းဘူး
အစ်မရေ တစ်ပန်းကန်လောက်ရှင် ညီမက ထမနဲသိပ်ကြိုက်တာ၊ စားချင်လိုက်တာနော် :)
2/18/2011 2:12 AM
ငတ်နေတာကြာပြီကော.. အဲဒါတွေ.. :P.. ပုံကိုကြည့်ပြီး ဂလုဂလုနဲ့ နေသွားတယ်...
သူမွှေ တာကို ဖတ် ပြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် လက်ပါ ညောင်း သွားတယ်။ ထမနဲ ကတော့ မွှေနေကတည်း က ခဏခဏ မြည်းနေတော့ တကယ်တမ်းမှာ မစား နိုင်တော့ဘူး။
2/18/2011 3:56 AM
Share သွားပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ Post လေးကြိုက်လို့ပါရှင် ။
ရေးထားတာ ဖတ်ရတာ ချစ်စရာကောင်း၊ ချက်ပြတာ မြင်ရတာ စားချင်စရာကောင်းနဲ့... ရသတွေ စုံလိုက်တာ... ထမနဲ မကြိုက်တဲ့သူတောင် စားချင်သွားတယ်...။
ထမင်းအိုးက နားမလည်ဘူး ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ အသံထွက်အောင် ရယ်မိတယ်... ဟုတ်တယ်.. သူသိပ်ဆိုးတယ်နော်... ဟီဟိ
2/18/2011 5:50 AM
ဒီနေ့ဆို ကျနော်တို့ သန်လျင်မြို့မှာ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပွဲတော်ရဲ့ အစည်ကားဆုံးနေ့ပေါ့။
လမ်းတလျှောက်ဈေးတန်းတွေမှာ ထမနဲဒယ်တွေ တတန်းကြီးပဲ။ အိုးကြီးတွေနဲ့ ရောင်းကြတာလေ။ ဘုရားပွဲပါတ်ပြီး ပြန်လာရင် ထမနဲတထုပ်တော့ အိမ်ကို ဝယ်လာကြပြီး မနက်စာ လ္ဘက်ရည်နဲ့ စားကြတာ။
မမေရဲ့ ထမနဲ ကြည့်ပြီး ဘုရားပွဲကို တအားလွမ်းသွားမိတယ်။
တကယ်သနားပါတယ် တယောက်ထဲ ကုသိုလ်တွေ အများကြီးရပါစေဗျာ မရွှေစင် ကတော့ ထမနဲ သိပ်မကြိုက်လို့ နဲနဲလေး မြည်းပြီးပြန်သွားပြီနော်
2/18/2011 10:45 AM
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါ မမေ....
ကျမကတော့ ထမနဲကြိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာ ပျင်းလို့ ၀ယ်စားတဲ့သူ... ဒီနေ့ မနက်ရော ညရော စားခဲ့တာ
2/18/2011 1:12 PM
ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်..ပုံတွေ့ တာနဲ့ စားချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတယ်..။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ့်လက်မောင်း ကိုယ်သယ်လာပါ..
အမ အမထမနဲအိုးကို အိုးလိုက်မသွားတာပဲ..
2/19/2011 4:57 AM
2/11/2017 2:46 PM